आयोजकको व्यवस्थापन र पत्रकारको स्थान « Anumodan National Daily
आयोजकको व्यवस्थापन र पत्रकारको स्थान
प्रकाशित मिति :2February, 2018
ऐना अगाडि जुन वस्तु आउँछ, ऐनाले त्यो बिम्ब जस्ताको त्यस्तै देखाउँछ । तर, ऐना अड्याउने फ्रेम र पछाडिको भाग देखिँदैन । लामो समय बेवास्ता गरेमा खिया बस्छ, त्यसपछि ऐनाको सीसा पछाडिको लेप खुइलिन्छ । अनि त्यस्तो ऐना हेरेपछि आफ्नै अनुहारमा प्वाल परेको भान हुन्छ । भनिन्छ, मिडिया समाजका ऐना हुन । रिपोर्टिङका क्रममा पत्रकारले आफूलाई फ्रेमको रूपमा उभ्याउँछन् । समाजमा भएका घटनालाई संकलन गरी मिडिया मार्फत देखाउने प्रयास गर्छन् । जसरी फ्रेममा अडिन पाएन भने ऐना खस्छ, बिम्ब देखिँदैन, त्यस्तै पत्रकारले उचित स्थान पाएन भने समाजमा भएका घटनालाई सही किसिमले अवलोकन गर्न पाउँदैन र सामाजिक घटना वा कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण बिम्ब र आवाज छोप्न सक्तैन र दुनियाँलाई देखाउन पनि सक्तैन ।
सांसदका लागि छुट्याइएको आसनमा खुट्टा राख्न त के, बस्न पनि अरू कोही योग्य हुँदैन । यो संस्कारहीन कर्म मानिन्छ ।
आयोजकहरूको चाहनामा आफ्ना कार्यक्रमको सञ्चार माध्यममा राम्रो कभरेज आवस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर, सबै कुराको कभरेजको वातावरण भने बनाइएको हुँदैन । कुरा गर्दा मिडियाको महत्त्व र पत्रकारको गुणगान राम्रै सुनिन्छ । तर, पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्दाका समस्या र पीडाका बारेमा कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
धेरैजसो औपचारिक कार्यक्रममा पत्रकारका प्रतिनिधिलाई आसन ग्रहण गराउने चलन छ । अरूलाई ‘यथास्थान’ मा भन्ने चलन छ । तर, कति पत्रकारलाई बोलाइएको छ त्यतिलाई पुग्ने ठाउँ छ कि छैन भन्ने आयोजकले हेक्का राखेको पाइँदैन ।
रिपोर्टिङको वातावरण मिलाउन नसके राम्रो कभरेज नहुन सक्छ । उदाहरणका लागि पत्रिकामा फोटो आउन पत्रकारले उपयुक्त क्षणमा फोटो लिन पाउनु पर्छ । रेडियोमा आवाज बजाउने हो भने माइकको नजिक वा स्पीकरको नजिक रेकर्डर राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । टेलिभिजनका लागि हो भने प्रकाशको उचित व्यवस्था र भिजुअल गरिनु पर्ने स्थान नजिक एंगल मिलाएर क्यामेरा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था नभएको अवस्थामा लिएका फोटो, आवाज र भिजुअल (फुटेज) प्रकाशन/प्रसारण योग्य नहुन सक्छन् अथवा प्रकाशन/प्रसारण नहुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पत्रकारको समय र मिहिनेत खेर मात्रै जादैन, आयोजक र पत्रकारको सम्बन्धै बिग्रिन्छ ।
समाचार संकलन गर्दा पत्रकारका समस्या
राउण्ड टेवल भएको स्थानमा बाहिरभित्र आउजाउ गर्न मिल्ने गरी अलग्गै हलभित्र वा खुलास्थानको सभा समारोह हो भने सामान्यतया: स्टेज बनाइएको हुन्छ र अरू सहभागी विपरित दिशाबाट फर्केका हुन्छन् । यस्तो स्थानमा स्टेज र अन्य सहभागीको बीचका दायाँबायाँ बस्ने व्यवस्था भए फोटो, आवाज र फुटेज लिन सजिलो हुन्छ ।
धेरैजसो कार्यक्रमस्थल मिडियामैत्री रहेको पाइदैन । पत्रकारलाई बस्न छुट्टयाइएको स्थानबाट फोटो र फुटेज लिन प्रकाशको उचित व्यवस्था भएको पाइदैन । आवाज रेकर्ड गर्न स्पीकरको आवाज अस्पष्ट वा बढी जोडको भएकाले काम नलाग्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा पत्रकारले उपयुक्त स्थानतिर आउजाउ गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर पत्रकारको लागि उपयुक्त ठाउँ नै हँुदैन । पत्रकारको भन्दा अगाडि सहभागीहरू नै मोवाइल ठड्याउँछन् । त्यसो हुँदा महत्त्वपूर्ण क्षण क्याप्चर गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । अर्को कुरा पत्रकारको उपस्थितिका आधारमा पुग्ने ठाउँ नै छुट्याएको हँुदैन, आउजाउ कठीन हुन्छ । गएर फर्किदासम्म आफू अघि बसेको स्थानमा अर्कैले आसन ग्रहण गरिसकेको भेटिन्छ । व्यवस्थित नभएको कार्यक्रम स्थलमा पत्रकारले आफ्नो सुरक्षा, आफ्ना उपकरणको सुरक्षा गर्दै आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री संकलन गर्न सक्नु निकै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । आयोजकका लागि कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने पत्रकारले कार्यक्रम सकिएपछि समाचार लेखन, सम्पादन, रेकर्डिङ, सम्प्रेषण, प्रकाशन र प्रसारणका काम सीमित समयभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कार्यक्रमस्थलमा उपयुक्त वातावरण र आवश्यक सामग्री सहज रूपमा संकलन गर्न सकिएन भने पत्रिका, रेडियो, टीभी, अनलाइनमा राम्रो समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्न कठिनाई हुन्छ । दिनभर दु:ख गरेर संकलन गरेर ल्याएको सामग्री उपयुक्त भएन भने सम्पादकले त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छन् र मिडियामा आउनुपर्ने कुरा आउँदैन । रिपोर्टरले उल्टै सम्पादकको गाली खानुपर्छ । मिडियाले आम स्रोता र दर्शकको गाली खानुपर्छ ।
अकस्मात भएका घटना र कार्यक्रमबारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा आयोजकहरूले मिडियाको स्थानका बारेमा ख्याल गरिदिनु पर्दछ । पत्रकारहरू विधा अनुसार फोटोको लागि क्यामेरा, आवाजका लागि रेकर्डर र फुटेजका लागि मुभी क्यामेरा प्रयोग गर्छन् । मल्टिमिडिया जर्नालिज्म वा फरकफरक मिडियालाई एउटै पत्रकारले समाचार सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्दा एउटै पत्रकारले दुई वा दुईभन्दा बढी उपकरण पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ । उपयुक्त स्थान भएन भने या त सामग्री संकलनमा बाधा पर्छ वा उपकरण खतरामा पर्न सक्छन् ।
यस्तै, सबै पत्रकाहरूको एउटै अवस्था हँुदैन । विभिन्न अवस्थाका महिला हुन्छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन्छन् । उमेर पाकेका अथवा कमजोर स्वास्थ्य भएका पनि हुन्छन् । उनीहरूको अवस्था अनुसारको व्यवस्थित ठाउँ पनि आवश्यक हुन्छ । आयोजकहरूले यस्ता कुरामा ख्याल गरिदिनु पर्दछ । व्यवस्थापन नमिलेको स्थानमा पेसालाई मात्र दृष्टिगत गरी समाचार संकलन कार्य गरिरहँदा कार्यक्रममा अवरोध वा पत्रकारको व्यवहार असभ्य पनि देखिन सक्छ ।
कार्यक्रम कसरी भद्रगोल हुन्छन् ?
हरेक कार्यक्रम सभ्य हुनुपर्दछ । आयोजकले सबै कार्यक्रम भव्य होउन् भन्ने चाहना राखेको हुन्छ । सञ्चारको युगमा कार्यक्रम सभ्य र भव्यताको मापन मिडिया कभरेज पनि हो । कुनै आयोजकले कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि लक्ष्य पूरा भइहाल्नु पर्ने हो त्यसको समाचार मिडियामा आवस् वा नआओस् कुनै मतलव नहुनुपर्ने हो, तर कार्यक्रमको समापनपछि पनि मिडियाको कभरेज, सकारात्मक, नकारात्मक टिप्पणीको मजा बेग्लै हुन्छ ।
पत्रकारका लागि छुट्याइएको स्थान उपयुक्त र पर्याप्त हुँदैन
कैलालीमा २५ वटा स्थानीय एफएम छन् । त्यत्तिकै मात्रामा स्थानीय पत्रिका छन् । १२ वटा राष्ट्रिय दैनिक तथा समाचार एजेन्सीका संवाददाता र त्यत्तिकै संख्यामा काठमाडौंबाट प्रसारण हुने टीभीका संवादतादा छन् । धनगढीमै दुई वटा स्थानीय केवल टेलिभिजन भएकाले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्दा प्राय: कार्यक्रममा एउटै मिडिका दुई वा बढी सञ्चारकर्मीको उपस्थिति हुने गर्दछ । सबै मिडियाका एकएक जना मात्रै प्रतिनिधि एकै ठाउँमा उपस्थित हँुदा पनि कैलालीका मात्रै ७५ जना पत्रकार भेला हुन्छन् । यद्यपि, सबै मिडियाका प्रतिनिधि उपस्थित हुँदैनन्, तर राष्ट्रिय र प्रदेश महत्त्वका कार्यक्रममा कैलाली भन्दा बाहिरका पत्रकार पनि उपस्थित हुन्छन् । आयोजकहरूले निमन्त्रणा गरेका पत्रकारको संख्या वा सार्वजनिक महत्त्वको कार्यक्रम भएमा पत्रकार उपस्थित हुन सक्ने संख्याको आंकलन गरी स्थान मिलाउनु आवश्यक हुन्छ ।
उदाहरणको लागि २०७४ माघ ७ गते प्रदेश सभा सदस्यको सपथ ग्रहण कार्यक्रम लिन सकिन्छ । प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सभा भवन जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको सभाहललाई बनाइएको थियो । माघ ७ गते बिहानसम्म रगंरोगन हँुदै गरेको हलमा सपथग्रहण कार्यक्रम भयो । हतारमा भए पनि आयोजकले स्टेज, ५३ जना प्रदेश सांसदका लागि राता रंगका ६० वटा कुर्सी, अतिथिका लागि सेता रंगका डेढ सय कुर्सीको व्यवस्था गरेका थिए । अतिथिहरूको क्षेत्र अनुसारका प्लेट पनि टाँरिउको थियो । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री, सांसद, उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, स्थानीय तहका प्रमुख तथा पत्रकारहरूका लागि बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जब कार्यक्रम शुरु भयो । सभाहलमा पार्टी कार्यकर्ता र सांसदका परिवारका सदस्यहरू पनि छिरे । उनीहरूका लागि प्रर्याप्त स्थान छुट्याइएको थिएन । पूर्व सांसद, पूर्व मन्त्रीका लागि छुट्याइएका स्थानमा पार्टी कार्यकर्ता बसे । सुरक्षा अधिकारीहरूलाई छुट्याइएको स्थानमा सांसदका पारिवारिक सदस्यहरूले ओगटे । सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले धेरै प्रयास गर्दा पनि ठाउँ खाली गर्न सकेनन् । सभाहलमा प्रदेश प्रमुखसँगै आएका सुरक्षा अधिकारीहरू ठाउँ नपाएपछि यताउता गरेरै निस्किए । कार्यक्रम छोटो भएकाले खासै असर परेन ।
प्रदेश सांसदहरूको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा समस्या परेको थियो, पत्रकारलाई । पत्रकारलाई फोटो लिन, आवाज रेकर्ड गर्न, फुटेज खिच्न ठाउँ नै राखिएको थिएन । पत्रकारका लागि पनि दुई वटा लाइनमा १४ वटा कुर्सी राखिएका थिए, तर धेरै पछाडि । जहाँ बसेर समाचार संकलन गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले मुभी क्यामेराहरू प्रदेश प्रमुख बस्ने मञ्च र सपथ लिने सांसदको बीचमा ठड्याइए । जो एकदमै अशोभनीय देखिथ्यो, तर पत्रकारका लागि बाध्यता । जब प्रदेश प्रमुखले ज्येष्ठ सांसदलाई सपथ गराउन थाल्नु भो, हलमा बसेका केही सांसद स्वयं र पार्टी कार्यकर्ताहरू फोटो खिच्न मञ्चतिर कुँदे । त्यसबेला त्यहाँ मुभी क्यामेरा जोगाउनै मुस्किल भएको थियो भने पछाडि बसेका पत्रकारहरूले फोटो खिच्न मञ्चतिर जानै पाएनन् । छोटो सपथ ग्रहण कार्यक्रम सकियो । अब सांसदहरूको सामुहिक फोटो लिने कार्यक्रम थियो । मञ्च र मञ्चको अगाडिपट्टी सांसदहरू बसेका थिए । फोटो खिच्न पार्टी कार्यकर्ताहरूको भिड लाग्यो । केही कार्यकर्ता सांसद बस्न राखेका राता कुर्सीमाथि चढे, त्यसरी नै पत्रकार पनि कुर्सीमाथि चढे । सभाहल व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीले केहीलाई हातै समातेर झार्नुपर्‍यो । उनी भन्दै थिए– ‘कस्ता पत्रकार ….. ?’
संसदको गरिमा खै ?
संसदीय व्यवस्थामा चाहे जुन तहको होस् सांसदको सम्मान र संसदको गरिमा उच्च र अतुलनीय हुन्छ । प्रजातन्त्र भएको देशमा जनताबाट चुनिएका सांसद र उनीहरू बसेर बहस, छलफल गर्ने थलोप्रति सम्मान गर्नुपर्दछ । सांसदका लागि छुट्याइएको आसनमा खुट्टा राख्न त के, बस्न पनि अरू कोही योग्य हुँदैन । यो संस्कारहीन कर्म मानिन्छ । व्यवस्थाकीय कमजोरी हुँदा पनि सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सांसदको सपथ ग्रहणका लागि राखिएका राता कुर्सीमा सांसदसँग कुममा कुम जोडेर जोकोही बस्नु निकै अशाोभनीय देखिन्थ्यो । यसले न सांसदको मर्यादा राख्छ, न अरू व्यक्तिको इज्जत नै । यहाँ अरू कार्यक्रममा पनि यस्तो हुन्छ । तर संसद भवनभित्र पनि यस्तै घटना हुनु अस्वाभाविक हुन्छ । आशा छ, भोलिका दिनमा संसदमा यस्तो दृश्य र कर्म दोहोरिने छैन । सार्वजनिक महत्त्वका अन्य कार्यक्रममा पनि थिति बसोस् । कार्यक्रम मिडियामैत्री भनौ अथवा समाचार संकलनका लागि सहज हुने खालका होउन् ।